Banyere Anyị - Guangzhou Chengfeng Nwanna Industrial Co., Ltd.
Kedu maka gị?
njem ụgbọ mmiri, ịdị n'otu na ọganihu, ezi omume na elele ọnụ, nnweta ọrụ!
na-ụlọ ọrụ pilot nke n'etiti-elu ọgwụgwụ ọgwụgwụ glassware customization, na-eme ka a dị iche na ahaziri customized, na-eme ka anyị ụdị bara uru karị!
iko enyo anyi n’eme ka ibi ndu di ocha!
mma, ịdị mma, uru, mmadụ
Okwu Mmalite Company
Aha a bu nchikota nke ndi oru ulo oru abuo CHENG na FENG ndi amuru bu umu nne. Akara ahụ na - agwakọta aha ha ma debe ya n’ime urukurubụba. Nkọwapụta nke akara ngosi a bụ 'iji nku abụọ dị ike efe efe, dịrị n'otu ma bulie elu iji nweta nrọ ahụ'. Butterflies na-atụnyere si larva n'ime yi ọdịiche dịgasị iche nke shapes, si butterflies ozuzu larva, si larva atụ n'ime butterflies, ndụ okirikiri na-aga n'ihu. Nke a na-egosi na ụlọ ọrụ anyị na-eto site na obere ruo nnukwu, usoro ọ bụla anyị na-agbanwe, gbanwee na ihe atụ site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, anyị na-etolitekwa na-adịgide adịgide.
Nke a LOGO imewe sitere na nkwonkwo aha nke iko iko na wiski, ọ na-etinyere na wiski cup usoro origination ika. Emere mkpụrụedemede 'G' dị ka nlele echiche nke leta izizi na iko wiski. Emechaa n'ihi agụụ na-eto eto nke ahịa, etinyere ya ugbu a mana ọnweghị oke na aha nke kọfị kọfị, iko mmanya mmanya uhie, iko mmiri ara ehi na ngwa iko iko ndị ọzọ kwa ụbọchị. A na-ere ahịa ndị a ma na-ere ha site na ntanetị ịntanetị E-commerce.